Architecture | Roger Quest International ﻿
6.4.2021, အချိန်ပြည့် , Employment Agencies
•	able to produce own construction drawings.
•	deal with client's project brief
•	able to use email professionally
•	BS degree in Architecture
•	Be able to review Architecture design drawings in coordinating with MEP/Structure.
•	Be able to draw interfaced details Structure/ MEP/Archi.
•	Experiences in: Reviewing Architectural shop drawings
•	More than 8 years experiences in related field
•	Good in English.
ကျွန်တော်တို.ကမ်းလှမ်းသည် •	Male Or Female
အလုပ်တည်နေရာ Yangon , Myanmar
10 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Employment Agencies
14 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Employment Agencies
15 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Employment Agencies
16 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Employment Agencies
19 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Employment Agencies
20 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Employment Agencies
22 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Employment Agencies
23 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Employment Agencies
25 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Employment Agencies
28 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Employment Agencies
40 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Employment Agencies
42 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Employment Agencies
43 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Employment Agencies
44 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Employment Agencies
52 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Employment Agencies
54 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Employment Agencies
63 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Employment Agencies
64 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Employment Agencies
65 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Employment Agencies
72 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Employment Agencies
76 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Employment Agencies
117 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Employment Agencies
148 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Employment Agencies
158 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Employment Agencies
Architecture Architecture & Design Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon Roger Quest International Co., Ltd Architecture & Design jobs Architecture & Design jobs Service မြန်မာနိုင်ငံရှိ အလုပ်များ၊ ရန်ကုန်ရှိအလုပ်များ
Yangon (Rangoon) 346 နေ့များ